Shiinaha Collagen oo loogu talagalay warshadda baarka nafaqada iyo alaab-qeybiyeyaal. Gelken
Baarka nafaqada ee Collagen waa badeecad beddel cusub oo cunno caafimaad leh oo macaan u leh badarka badarka badan ee dadka. Baararka nafaqada ee Collagen diyaar u ah beddelka cuntada mar dambe ma xaddidi doono goobta cunidda, taas oo aad ugu habboon caadooyinka nololeed ee dhallinyarada maanta.
Waxaad ku raaxeysan doontaa cunista tan baarka nafaqada: Waxaa lagu sameeyaa kolajiin lagu taageerayo maqaarka, lafaha iyo kala-goysyada iyo dufanka tayada u leh tamarta joogtada ah. Collagen waa xabagta isku haysa wax walba. Markaan sii gaboobeyno, waxsoosaarkii ayaa hoos u dhacay. Wax soo saarkayagu waxay diiradda saaraan fayoobaanta gudaha.Horumarka degdega ah ee nafaqada leh maalmahan, borotiinku waa maado aad caan u ah.
Laakiin cunnooyinka shaqeynaya iyo nafaqada dheeraadka ah, ku darista tiro badan oo borotiin ah badeecada ugu dambeysa waxay noqon kartaa dhibaato.
Si kastaba ha noqotee, iyadoo la kaashanayo tiknoolajiyada wax soo saarka ee Gelken, budada kolajka si fudud ayaa loogu isticmaali karaa wax soo saar baararka nafaqada leh ilaa 35% maadada kolajka.Khibrad badan oo farsamo, nafaqo iyo xeeldheerayn sharciyeyn ah ayaa loo baahan yahay si loo fahmo hannaanka horumarinta ee alaabooyinka leh qiime dheeraad ah.
Waxaan si joogto ah ula soconnaa suuqyada adduunka iyo isbeddelada macaamiisha si aan uga caawinno macaamiisheenna inay horumariyaan habab cusub oo lagu abuuro alaabooyin cusub.
Hadday ahaan lahayd xagga taageerada farsamada, qaabeynta ama horumarinta fikradda, iyo sidoo kale talobixinta nafaqada iyo sharciyeynta, waxaan ku siineynaa hagitaan iyo khibrad dhammaan silsiladda qiimaha si aan uga caawinno macaamiisheenna inay qabsadaan fursadaha xoogga leh ee kobaca kolajka cusub ee suuqa.Collagen farsamo ahaan wuu xoogan yahay, wuxuu caawiyaa inuu jirka siiyo qaab dhismeedkiisa isla markaana uu u gudbiyo awooda muruqyada, laakiin si aan si fiican loo aqoon ayaa ah inuu sidoo kale firfircoon yahay.
Gelken wuxuu awoodaa inuu helo isku xigxiga saxda ah ee peptides wuxuuna gaarsiiyaa peptides-ka bioactive ee kuxiran kolajka dabiiciga ah jirka meelkasta oo looga baahdo.Collagen waa isha ugu fiican ee laga helo kaabayaasha jirka sababtoo ah waxay jirka ku kiciyaan inuu soo saaro collagen badan.
Hore: Koolajyada loogu talagalay qurxinta
Xiga: Kolajka loogu talagalay cabitaanka adag